I-Eyeglass Iqoqo „eliphambili | ukhuni “lubonakala ngezibuko ezinamandla kakhulu futhi ukwakheka kugcizelelwa ukwakheka okuveziwe kathathu. Ukuhlanganiswa kwezinkuni okusha kanye nokugcotshwa kwesihlabathi ngesandla kusho ukuthi ifreyimu ngayinye yesibuko sesobala se-ROLF isiqephu esihle sobuciko.
Amacici Nendandatho Iqoqo le-Mouvant laphefumulelwa ezinye zezinto zeFuturism, njengemibono yokuguquguquka nokwenziwa izinto ezibonakalayo kokungabonakali okwethulwe ngumdwebi wase-Italiya uMberto Boccioni. Amacici kanye nendandatho ye-Mouvant Collection ifaka izingcezu ezimbalwa zegolide ezinobukhulu obuhlukahlukene, ezihlanganisiwe ngendlela yokuthi zifinyelele ukukhohlisa kokunyakaza futhi zenze amajamo amaningi ahlukahlukene, kuya nge-engela yokuthi ibonwa ngamehlo.
Indandatho Umhlaba wemvelo uhamba njalo njengoba ulinganisa phakathi kokuhleleka nezinxushunxushu. Idizayini enhle idalwa kusukela ekuxosheni okufanayo. Izici zayo zamandla, ubuhle namandla asuselwa emandleni omculi wokuhlala evulelekile kulawa aphikisayo ngesikhathi sokudalwa. Ucezu oluqediwe luyingqayizivele yezinqumo eziningi ezingenziwa umdwebi azenzayo. Konke ukucabanga futhi akukho muzwa kuzoholela emsebenzini olukhuni futhi obandayo, kanti wonke umuzwa futhi akukho mthetho olawulayo uveza umsebenzi ohluleka ukuziveza. Ukuhlangana kwalaba bobabili kuzoba ukubonakaliswa komdanso wokuphila uqobo.
Indandatho I-Eyeglass Amacici Nendandatho Amacici Nendandatho Indandatho Ukugqoka